Akhriso :- Warsaxafadeed Hada Ka Soo Baxay Xafiiska Safaaradda Somaliland Ku Leedahay Dalka Imaaraadka Carabta | Saxil News Network
Akhriso :- Warsaxafadeed Hada Ka Soo Baxay Xafiiska Safaaradda Somaliland Ku Leedahay Dalka Imaaraadka Carabta
Hargeysa (Saxilnews):- Xafiiska Somaliland Mission UAE wuxuu ku wargalinayaa dadweynaha reer Somalilandin maalinta Khamiista ee bishu tahay 26-ka, April, 2017, ay dalka Jamhuuriyada Somaliand iman doonaan haddii Alle idmo kooxo dhakhaatiira oo ka socda dalka aynu walaalahanay ee Imaaraadka Carabta gaar ahaan (Zayed Giving Medical Initiative).
Kooxahaasi oo isugu jira dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaal caafimaad tiradooduna dhan tahay 18 qof, ayaa inta ay joogaan Somaliland waxay hawlgal caafimaad oo kala duwan ka fullin doonan goobo dhawra oo dalka gudihiisa ah. Haddaba waxaanu ku wargelinaynaa shacbiga reer Somaliland in ay soo dhaweeyaan una diyaar garoobaan gargaarkaa binu aadaminimo ee ay dadkeena u fidinayaan dhakhaatiirtaasi. Taasi oo ku timid dedaal iyo karti ay saxaafadu ka geysatay in ay dadkeeda abaaraha iyo xaalada caafimaad daro isugu darsan tahay u helaan dhakhaatiir iyo kal-kaaliyeyaal heer caalami ah.
Hawlgaladan caafimaad ee ay Hay’adda Khayriga ee Zayed Giving Initiative fullinayso oo bilow ah, ayaa noqon doonaa kuwo ay dalkeena ka fullinayaan sannadkii dhawr jeer, iyagoo iska kaashan doona Wasaarada Caafimaadka Somalliland wasaaradda Caafimaadka ee Imaaraadka Carabtu.